Malunga nefilimu ejongene neplywood
ngomphathi ku 20-12-02
Impahla ekrwada esetyenziswe kwifilimu yokwakha ephezulu ejongene neplywood yi-birch enobuninzi be-700KG / M3. Ngenxa yokuba izinto ze-birch zinzima, ifilimu ejongene neplywood eyenziwe nge-birch icaba kakhulu kwaye inesikhundla esiphezulu sokuthwala umthwalo. Akuyi kubakho ukugoba phantsi koxinzelelo oluphezulu. Ukongeza, i-surf ...
I-Plywood luhlobo lwebhodi eyenziwe ngomntu ehlanganiswe ngokuxobuka. I-Plywood yenziwe ngokusika kwiindawo ezinkulu kwiindawo zangasese. Emva kokumisa nokudibanisa, iveliswa ngokwemigangatho yokuma okuziinkozo kwe-mahogany nkqo ye-veneers ezikufutshane. Ubundindisholo ...
Iplywood yolwandle-iplywood engenamanzi
I-ROCPLEX plywood yaselwandle yenye yezinto ezisetyenziswa rhoqo ngomthi ekwenziweni kwefanitshala engenamanzi kunye nokufuma-ubungqina kunye nokuhombisa. Ingayiphucula indlela yokusetyenziswa kweenkuni kwaye yeyona ndlela iphambili yokugcina iinkuni. I-ROCPLEX plywood yolwandle inokusetyenziswa kwizikhephe, kwishishini lokwakha ...